Welcome to Aayaha Nolosha » MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 1:AAD).
MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 1:AAD).
May 6, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Ramadan, waa bisha uu Rabbi (SWT) ka doortay bilaha sanadka, markuu doonay inuu adoomihiisa usoo dajiyo, Kitaab u noqda Nuur ama Nal u iftiimiya jidka ay ku gaari lahaayeen Horumar Aduun iyo Guul Aakhiro labadaba.
Ramadaan waa bisha 9aad ee bilaha Islaamka, Waana bil u sida dadka mu’miniinta ah Hanuun iyo khayr aad ufara badan, lagana rabo inay Rabbi (SWT) aad ugu sii dhawaadaan iyagoo ka-siyaad sanaya jacayl, raxmad iyo danbi dhaaf.
Soonkuna waa Cibaado aad u fadli badan, waana Cibaado soo jireen ah oo uu Rabbi (SWT) ku faral yeelay dhamaan Umadihii Muslimka ahaa ee inaga horeeyay.
Bishu maxay qiimahaas oo dhan ku mudatay? Jawaabtu waa inuu Rabbi (SWT) soo dejiyay habeen bishan ka mid ah Quraankiisa Kariimka ah, isagoo kasoo dejiyay Looxul maxfuud una soo dejiyay meel la yiraahdo (Baytul Cissah) oo kutaala samada kowaad, kuna aadan Kacbada sharafta leh korkeeda.
Halkaas oo Malaaigta u ah Kocbada Samada ee ay Tawaafaan, sida ay Mu´miniintu u Tawaafaan Kacbada. Fadliga bishaa barakaysan waan ka war-bixin doonaa, laakiin inta taa ka horaysa waxaa su`aal ah sideen uga faa-iidaysan karaa fadliga iyo Ajarka bisha Ramadaan? Jawaabtuna way sahlan tahay.
Kow waa inaan garano oon qadarino qiimaha ay bishu inoo leedahay, kadibna aan sifiican ugu diyaar garowno. Maxaa yeelay waxaan loo diyaar garoobin oon loo tabtaysanin Guul mira dhasha lagama gaaro.
Tusaale yar hadaaan soo qaadano, qofkii lagu yiraahdo waxaa kuu soo socota marti sharaf leh, waxaa hubaal ah inuusan iska sugaynin si ay uga dul yimaadaan Gurigii oo isku dhex daadsan, oo wasakhaysan.
Balse wuxuu ku dadaali siduu Guriga usii habayn lahaa, qurxin lahaa, carfin lahaa, cunto macaana ugu sii diyaarin lahaa, wakhtigay imanayaana isagoo diyaar ah usoo dhaweny lahaa.
Hadaba shaki maleh inay Bisha Ramadaan uga…..LA SOCO QEYBTA 2:AAD.